Creativezọ okike 5 Na-ere Ahịa Site na vidiyo YouTube na 2021 - SoNuker
Creativezọ okike 5 Na-ere Ahịa Site na vidiyo YouTube na 2021
N’inwe ihe karịrị ijeri vidiyo ise kwa ụbọchị, YouTube bụ otu n’ime saịtị atọ kachasị gaa na ụwa. Karịsịa na 2021, a gaghị eleghara ike nke ikpo okwu a anya site n'aka ndị chọrọ ịme ihe kachasị mma YouTube nwere inye.
Ihe na - eme ka ọ dị mma karịa maka ụdị na ndị na - emepụta ọdịnaya taa bụ na ikpo okwu ịkekọrịta vidiyo na - erute ndị na - ege ntị nọ n’agbata afọ 18 na 49 karịa netwọdụ USB ọ bụla ma ọ bụ igwe na - agbasa ozi n’ikuku na mkpanaka, dị ka HubSpot si kwuo. Otu a nwere ikike ịzụta kacha elu n'etiti ọgbọ niile, nke mere na ọtụtụ ụdị na-ahọrọ ịre ma ree ngwaahịa ha site na vidiyo YouTube.
Marketingre ahịa YouTube abụrụla akụkụ dị mkpa nke mkpọsa ahịa n'ịntanetị na-aga nke ọma, mana kedu ka ị ga - esi hụ na vidiyo gị gafere mkpọtụ ahụ wee nyere gị aka ire ngwaahịa? Ngwa ahịa mgbasa ozi na nzuzo nwere ike ịchụpụ ndị ahịa gị, nke bụ ya mere o ji dị gị mkpa ịme ihe.
Ndị a bụ ụfọdụ echiche ga - enyere gị aka:
1. Mbuputa uzo gi
Ihe mbụ ị ga - eme iji pụọ na oke osimiri nke ọdịnaya na YouTube bụ iji gosipụta ọwa gị ma kwụsie ike na ika gị gafee ọdịnaya gị. Nkọwa ike bụ mgbe ndị na-ege gị ntị nwere ike ịmata ngwa ahịa gị ozugbo n'agbanyeghị ebe ma ọ bụ mgbe ma ọ bụ otu ha siri chọta gị.
Na vidiyo ọ bụla, a ga-ekwupụta ọkwa gị na ozi gị n'ụzọ doro anya. Jide n'aka na njirimara gị ga-egosi na vidiyo gị niile, na ọkọlọtọ profaịlụ gị, na ọbụlagodi profaịlụ gị, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
2. vidiyo nyochaa ngwaahịa, ajụjụ ọnụ, skits, na na
Ndị a bụ ụzọ akọ ma dị mma iji ree ngwaahịa site na vidiyo YouTube. Ozugbo ị gosiputara ọwa gị, ịnwere ike ilekwasị anya na ịmepụta vidiyo dị ka ndị a. Mee ka ha bụrụ ihe na-atọ ụtọ, na-etinye aka, na-adọrọ mmasị ma na-arụpụta nke ọma.
Kama igosi ndị na-ege gị ntị mgbasa ozi vidiyo maka ngwaahịa ụfọdụ, ị nwere ike ikwu maka ngwaahịa a, gosipụta njirimara ya na uru ya, ma ọ bụ kọwaa otu esi eji ya na ụzọ okike. Ọ bụghị naanị na nke a na-eme ka ndị na-ekiri gị nwee obi ụtọ, kamakwa ọ na-eme ka ha mata, yabụ ha nwere ike nwee mmasị na ngwaahịa a.
3. Mee ka onye na-eso ya sie ike
Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke ahịa YouTube bụ ịmepụta okporo ụzọ na ịbawanye ahịa iji bulie akara ala. Enwere ike imezu nke a naanị mgbe ịnwere ndị na-ege ntị na ị nwere ike ịtụgharị nye ndị ahịa na-akwụ ụgwọ.
Ka ndị na-edebanye aha gị na channelụ, ị ga-enwetakwu echiche ị ga-enweta yana itinye aka na vidiyo gị nwere ike ịnata. Inweta nkwado na-esochi gị chọrọ ka ị nwee nghọta miri emi banyere ndị na-ege gị ntị, n'ihi na nke a na-enye ohere ọdịnaya gị.
4. Na-agbakwunye njikọ na nkọwa vidiyo na nkọwa
Ikekwe ị nụla YouTubers na-ekwu, "You nwere ike ịchọta njikọ dị na nkọwa dị n'okpuru" ma ọ bụ ihe yiri ya. Inye njikọta njikọta na nkọwapụta vidiyo bụ usoro a na-ahụkarị ma dị irè maka ịkwọ ụgbọala na saịtị gị.
Nwere ike ịnye njikọ ahụ na nkwupụta ebe YouTube na-enye onye nwe ọwa ohere ịkọwa okwu ahụ n'elu nke ngalaba nkọwa. Nke a pụtara na njikọ ị nyere bụ ihe anaghị ekwe anabata.
5. Na-agbakwunye ihuenyo ikpeazụ na-ejikọta na saịtị gị
Mgbe ndị na-ekiri elechara vidio gị, gịnị ma ị duru ha gaa na saịtị ebe ha nwere ike ịzụta ngwaahịa ahụ ị ka kwuchara maka ya? Ma ọ bụ ma eleghị anya, njikọta na vidiyo ọzọ ebe ha nwere ike ịmụtakwu banyere ngwaahịa ahụ? Ihuenyo na-enye nke ahụ.
Site na ndụmọdụ ndị a bara uru, ị nwere ike ree ngwaahịa site na vidiyo YouTube ma chụpụkwuo okporo ụzọ na saịtị gị.